के अभिषेकले ऐश्वर्यालाई प्रस्ताव गरेका थिए? ऐश्वर्याले खुलाइन् « Khabarhub
के अभिषेकले ऐश्वर्यालाई प्रस्ताव गरेका थिए? ऐश्वर्याले खुलाइन्
अभिषेक बच्चन र ऐश्वर्या राय बच्चन
मुम्बई – बलिउड हस्ती अभिषेक बच्चन र ऐश्वर्या राय बच्चनको सम्बन्ध समयसँगै थप बलियो हुँदै गएको छ । साल २००७ मा दुईले बिहे गरेका थिए । वर्तमानमा यी दुईकी एक छोरी पनि छिन्, जसको नाम आराध्या हो । जोडीले बिहेपछि कैयन् फिल्ममा एकसाथ काम पनि गरे । हालै एक अन्तर्वार्तामा ऐश्वर्याले आफ्नो करिअर र व्यक्तिगत जीवनका बारेमा खुलासा गरिन् ।
ऐश्वर्या र अभिषेकबीच के बारेमा बढी बहस हुन्छ भन्ने विषयमा कुरा गर्दै ऐश्वर्याले सुनाइन्, ‘स्वभाविक रुपमा हामीबीच मजबूत सम्बन्ध छ, बहस गर्नका लागि हामीबीच एकदमै सानो लाइन छ, जुन विषयमा पनि हामी निकै चर्चा गर्छौँ ।’
उनले अगाडि थपिन्, ‘हाम्रो बिहे भएको बाह्र वर्ष भइसक्यो, बिहेअघि पनि हामी लामो समय साथी थियौँ, हामीले एकअर्कालाई लामो समयदेखि जानेका पनि थियौँ,सधै धेरै कुरा ग–यौँ, हामीले जुन विषयमा पनि कुरा गर्छौँ ।’
ऐश्वर्याले आफूलाई पहिलो अभिषेकले प्रपोज गरेको पनि बताइन् । उनले भनिन्, ‘अभिषेकले मलाई प्रपोज गरे, तर त्यो निकै फटाफट भएको थियो ।’
यी दुईले एकसाथ कैयन् फिल्ममा काम गरिसकेका छन् । यो जोडीलाई अब फिल्म ‘गुलाब जामुन’ मा एकपटक फेरि एकसाथ देख्न पाइनेछ ।